Wenger Oo Shaaciyay Goorta Uu Macalinimada Ka Fariisanayo %
Wenger Oo Shaaciyay Goorta Uu Macalinimada Ka Fariisanayo
Tababaraha kooxda kubada cagta Arsenal ninka lagu magacaabo Arsena Wenger ayaa wajahaya cadaadis xoog leh, kaasoo uga imaanaya maamulka naadigiisa kadib markii uu ku guul dareystay inuu kooxda gaarsiiyo guulo la taaban karo 22-sano ee lasoo dhaafay.
Waxaa jira warar leysla dhexmrayo, kuwaaso daboolka ka qaadaya in macalinkaan reer France uusan baaqi kusii ahaan doonin Gunners-ka, fasal ciyaareedka soo aadan, islamarkaana go’aankaas ay qaataan maamulka Arsenal.
Inkastoo, Wenger uu sheegay inuu doonayo inuu baaqi kusii ahaado Arsenal, hadana waxaa wax laga weydiiyay in hadii ay dhacdo in laga eryo Arsenal, inuu guud ahaan xirfada macalinimo ka fariisan doono maa in kale.
“Wali ma aysan dhicin in macalin uu koox joogo wax ka badan 22-sano, laakiin aniga ayaa sidaas sameeyay, waxaana uga dan-leeyahay inaan cadeeyo sida ay igaaga go’an tahay inaan halkaan sii joogo,” ayuu Wenger usheegay Being SPORT.
“Hadii ay dhacdo inaan baxo waxaan u arkaa in aysan noqon doonin maalmahaygii ugu dambeeyay kubada cagta, waxaana doonayaa inaan kusii jiro ugu yaraan sanado kale oo aan kadib ka fariisto kubada cagta,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Ugu yaraan marka aan qabto hal koox oo kale, hadii aan ka tagao Arsenal, waxaan markaas aan ka bixi karaa kubada cagta,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, maamulaha naadiga kubada cagta Arsenal, ninka lagu magacaabo Arsena Wenger.
Sikastaba, Wenger ayaa waxaa hada kaga harsan qandaraaska uu hada ku joogo Arsenal 12 bilood oo kaliya, iyadoona aanan wali laga saxiixin heshiis cusub, taasoo shaki badan gelin karta in laga eryo shaqada Arsenal oo uu 22-sano soo hayay.
Kabtan Ramos Oo Amaan Kow Uga Siiyay Lionel Messi